विश्वदीपकाे कडा टिप्पणी: तपाईकै कारण बाबुरामले थुप्रै करिश्मा गुमाएकाे बिर्सिनु भाे ? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वदीपकाे कडा टिप्पणी: तपाईकै कारण बाबुरामले थुप्रै करिश्मा गुमाएकाे बिर्सिनु भाे ?
काठमाडौं, नायिका तथा पछिल्लाेे समयमा तत्कालिन नयाँ शक्तिमा सक्रिय करिश्मा मानन्धरले बाबुराम भट्टराईका बारेमा गरेकाे टिप्पणीमाथि नेता विश्वदीप पाण्डेले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
कुनैबेला बाबुरामसँग अत्यन्तै निकट रहेकी करिश्माले बाबुरामले कार्यकर्ता व्वस्थापन गर्न नसकेकाे भन्दै अालाेचना गरेेेेपछि विश्वदीपले ईतिहास फर्केर हेर्न करिश्मालाई अनुराेध गरेका हुन ।
पद र अवसर नपाएपछि मानिसले गर्ने अालाेचना असहज प्रकृतिकाे हुने भन्दै विश्वदीपले करिश्मालाई प्राथमिकता दिएकै कारण थुप्रै करिश्माहरु बाबुरामले गुमाउनु परेकाे बताएका छन् ।
पढनुस विश्वदीपकाे टिप्पणी
आजभोलि कतिपय टिप्पणीहरु व्यक्तिगत तहसम्म हुने देखेर अलिकति असहज लागेको छ । पञ्चायतकालीन विचार बोकेर आफूलाई वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरुदेखि कुनै निश्चित पद नपाएर घर छोड्नेहरु पनि कसरी हुन्छ डा. बाबुरामलाई कमजोर बनाउन र आरोपित गर्न कम्मर कसेर लागिरहेकै छन् ।
डा. भट्टराईले हिजोको दिनबाट राजनीति शुरु गर्नुभएको होइन । त्यसैले विदेशको जागिरमा पेन्सन पाकेपछि नेपाल फर्किएर मिडियाबाजी र एनजिओ शैलीको राजनीति गर्नेहरुले डा. भट्टराईको छवी अलिअलि धमिल्याउन खोज्दैमा दशकौं लामो राजनीतिक प्रतिवद्धता, ईमान्दारिता र शोषित पीडित र पछि पारिएका समुदायको आत्मसम्मान अनि नेपालको दिगो आर्थिक उन्नतिमा डा. भट्टराईको प्रतिवद्धतामा कहिले कमी आउने छैन ।
याे पनि पढ्नुस ‘आकाश खसोस्, पाताल भासियोस, बाबुरामले बिश्राम लिन्न’
याे पनि पढ्नुस डा भट्टराई भन्छन- ओली र मोदीबीचकाे वान टु वान वार्ता शंकास्पद
याे पनि पढ्नुस माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि नयाँ शक्तिका शीर्ष नेताहरुको दौडधुप
ट्याग्स: Baburam Bhattarai, Bishwadeep Pandey, Kariahma Manandhar